Gacantan Ekster waa wax kasta oo aad ugu baahan tahay MacBook-gaaga Waxaan ka socdaa mac
Gacan-qabashadaan Ekster waa waxa aad ugu baahan tahay oo dhan MacBook-gaaga
Haddii aad raadineyso dabool ka duwan kuwa kale, kaliya maahan tayada qalabka laakiin sidoo kale naqshadeynta iyo shaqeynta darteed, Ekster wuxuu ku siinayaa tusaale ah Waxay u shaqaysaa laptop kasta ama kiniin kasta illaa 13 inji waana intaas oo dhan waxaad u baahan tahay inaad ku qaadatid oo aad ku ilaaliso qalabkaaga.
1 Ilaalinta iyo gaadiidka
Ilaalinta iyo gaadiidka
Markaan raadineyno shaashad laptop-ka ama laptop-ka, guud ahaan waxaan dooneynaa wax sifiican ugu habboon, ilaaliya iyo in guud ahaan uusan aad u dhumuc lahayn Tani way fiican tahay, laakiin waxaa jira hal shay oo aan inta badan ku dhicin illaa goor dambe: Maxaa ku saabsan qalabyada? Haa, MacBook Air iyo Pro, iyo sidoo kale iPad-ku waxay leeyihiin ismaamul aad u weyn, laakiin in la baxo iyada oo aan xeedhoheenna dusha sare leenahay badanaa waa halis. Oo kii yidhi xeedho sidoo kale wuxuu dhahayaa fiilada lacag bixinta, jiirka, qalabka banaanka, iwm Ugu dambeyntiina waa inaan tagnaa boorso ama boorsada dhabarka si aan awood ugu yeelano inaan wax walba qaadno, taasina ma ahayn fikradda bilowga ah.
Ekster wuxuu rabay inuu tan ku xaliyo shaashadda laptop-ka, sidoo kale wuxuu ku sameeyaa naqshad qurux badan oo shaqeyneysa, iyo waliba adeegsiga agab qiimo sare leh sida maqaar. Daboolka wuxuu ka samaysan yahay dhar iska caabin ah oo gudaha ah kaas oo lagu daboolay microfibre jilicsan oo ilaaliya laptop-ka. Furka waxaa lagu dhejiyay maqaar, oo aan ku dooran karno midabbo kala duwan, waxaana ku xiran magnet awood badan oo ka ilaalinaysa laptop-keena inuu dhaco. Baaxaddiisu waxay u oggolaaneysaa inay dhigto qalab kasta illaa 13 inji, wuxuu ku habboon yahay 13-inch MacBook Air ama Pro, 12-inch MacBook Retina, ama iPad Pro labada cabbirba. Haddii aad u isticmaashid Keyboard-ka Magic-ka ah iPad Pro, 12,9-inji aad buu u adkaan doonaa, anigu kugula talin maayo.
Jeebkeeda hore waxay kuu oggolaaneysaa inaad keydiso buugaagta xusuusta ama kaararka, oo laastikada ku taal dhabarka ayaa noo oggolaaneysa inaan dhigno dhammaan noocyada qalabka: qalimaanta, qalinka Apple, ka qaad iyaga, fiilada, diskka banaanka ah, jiirka ... dhammaan qalabka aan u baahanahay maalinteena maalinba maalinta ka dambeysa iyadoo la socota laptop-ka ama kaniiniga ayaa lagu qaadi karaa xaaladdan, adigoon u baahnayn inaad u baahato bac kale oo dheeri ah. Dhabarka gadaashiisa waxaan ku haysannaa jeeb weyn oo aan ku dhejin karno A4 kasta oo aan dhibaato lahayn.
Naqshadeynta xiritaanka waxay ka dhigan tahay in labada dhinacba ay jirto meel ku filan oo ay ku habboon tahay awood u yeelanno inaad marin ka hesho dekedda MacBookkeenna si aan ugu buuxinno kiiska gudihiisa markaan guriga tagno, oo aan u diyaarsano subaxa dambe shaqo maalin kale ah. Jeelasha hore waa ka xor sacabka kiiska xiraya, si aan u helno wixii aan ku keydinay labadaba iyadoon loo baahneyn in kiiska la furo ama la soo bandhigo laptop-keena
Kiisku ma haysto wax xoojin ah oo gudaha ah si uu u qaabeeyo ama u ilaaliyo laptop-ka, laakiin marna ma siinayo dareenka nuglaanta. Qalabka la isticmaalay, tollooyinka iyo microfiber-ka gudaha waa go'an ka tagaya MacBook-keena gacmaha wanaagsan. Soo noqoshada, waxay heleysaa dhumucdeeda si ay u yaraato, inkasta oo ay iska cadahay haddii aan ku darno qalab ku xirmidda laastikada dambe way sii kordheysaa.
Si buuxda loogu cabbiray aaladaha ilaa 13 inji, kiiskan Ekster wuxuu ku habboon yahay kuwa ay tahay inay wataan MacBook ama iPad Pro meel kasta oo ay ugu baahan yihiin qalab kale shaqadooda. Uma baahnid wax boorso ama shandad boorso ah si aad wax walba u qaadi karto. Dharka maqaarku wuxuu ku darayaa taabasho tayo iyo kala soocid, iyo microfiche gudaha ku jira ayaa runtii runtii wacdaro ka dhigaya taabashada. Ma aha kiis raqiis ah, laakiin runtu waxay tahay in MacBookkeennu u qalmo. Waxaad ku iibsan kartaa $ 109 $ bogga internetka ee Ekster (isku xirka) oo ay la socdaan shixnad Spain.
Gacanta Laptop Laptop
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Kombiyuutarada Mac » Gargaarka » Gacan-qabashadaan Ekster waa waxa aad ugu baahan tahay oo dhan MacBook-gaaga
Asphalt 9: Halyeeyada waa la cusbooneysiiyay oo lagu soo bandhigay Mac App Store